अछामका बगर क्षेत्रमा धान पाक्न सुरु, कृषकलाई भित्र्याउने चटारो « Sudoor Aaja
२८ भाद्र २०७७, आईतवार १७:०६
अछामका बगर क्षेत्रमा धान पाक्न सुरु, कृषकलाई भित्र्याउने चटारो
पूर्ण बहादुर खड्का २८ भाद्र २०७७, आईतवार १७:०६
पूर्ण बहादुर खड्का ।
अछाम जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा धान पाक्न सुरु भएको छ । जिल्लाका बिभिन्न बगर तथा नदिखोला किनारमा लगाईएको धानखेती पाक्न सुरु भएको हो । कैलाशखोला, बुढीगंगा, जनाली रवा, खेतगैरा, लोडे क्षेत्रमा लगाईएको धानखेती पाक्न सुरु भएका हुन् ।
सामान्यतया असोजको अन्तिम तथा कार्तिक तिर पाक्ने धान खेती यसबर्ष भाद्रको अन्त्य तिर नै पाक्न सुरु भएको छ । बगर क्षेत्रमा अन्य सुख्खा क्षेत्रको भन्दा छिटो खेत रोपिन भएकाले पनि धानखेती अरु क्षेत्रको भन्दा छिटो पाक्ने गरेको स्थानियले बताएका छन् । बगर क्षेत्रका किसानहरुले धानखेती भित्र्याउन सुरु गरिसकेका छन् ।
कतिपय भरर्खर सुरु गरिएको छ भने कतिपयले अलि पहिले देखी नै धान खेती घर भित्र्याईसकेका छन् । यस बर्षको बर्षामा गएको बर्षको भन्दा बढी पानी पनि परेका कारण धान खेती छिटो पाकेको स्थानिय कृषक टंक रावलले बताए ।
यो बर्ष मानो छरेर मुरी आर्जन गर्ने कृषकका लागि खेती राम्रो भएको उनको भनाई छ । यतिबेला कृषकहरुलाई धान भित्र्याउने चटारो भएको छ । तर कैलाखोला, बुढीगंगा क्षेत्रका कतिपय स्थानमा भने बाढी पहिरोले खेतीयोग्य जमिन सहित धानखेत पनि बगाएर काम नलाग्ने बनाएको छ ।
बगर क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनमा उर्वर माटो भएकाले धानखेती पनि राम्रै फल्ने गर्छ । खोलाका किनारमा रहेका खेतमा सिंचाइको लागि प्रयाप्त पानी उपलब्ध हुने भएकाले पनि खेती छिटो पाक्ने गरेको स्थानिय किसानहरु बताउनछन् ।
उर्वर जमिनको हराभरा धानखेतीले ग्रामीण पर्यटनको प्रयाप्त सम्भावना बाक्ने समेत कतिपयको बुझाई छ । यसबर्ष देशभर लकडाउन भएपिन अछामका बगर क्षेत्रका खेतहरुमा जेठ असारको महिना रोपाईको रौनक पनि कम थिएन ।
बैशाखको अन्तिम साताबाट नै अछाममा रोपाईको चटारो सुरु हुन्छ । अछामको साँफेबगर लगायत सिँचाई सुबिधा पुगेको ठाउमा बैशाखको अन्तिमबाट नै रोपाई सुरु भएको थियो । साँफेबगर र आसपासका खेतहरुमा बुढीगंगा नदी तथा प्रभालीगाडको पानीबाट सिँचाईको सुविधा भएकाले बैशाखको अन्तिमबाट धान रोपाई सुरु भएका थिए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र अछामका अनुसार जिल्लामा करिव साढे १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको खेती गरिन्छ । जिल्लाको कुल खेती योग्य जमिन ५६ हजार तीन सय ४७ हेक्टर रहेकोमा ४२ हजार चार सय १३ हेक्टर क्षेत्रफलमा अन्नबाली लगाउने गरिन्छ ।
फोटो : अछाम जिल्लाको कैलाशखोलामा धान खेती भित्र्याउदैँ गरेका किसानहरु तस्वीर : पूर्ण बहादुर खड्का ।
नहरमा पहिरो गएपछि विद्युत पुन अवरुद्ध
बाजुरा – जिल्लाको पुर्वी उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने बुढिनन्दा नगरपालिका वडा न ३ को तिलाडीमा भाद्र ३१ गते बिहिबारको राती आएको
डा. गोविन्द केसी अब काठमाडौंमै अनशन बस्ने
सुर्खेत- आठ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले जुम्ला छोडेका छन्। डा. केसीले काठमाडौंबाटै सत्याग्रह जारी राख्ने गरी आज नेपालगञ्ज
डा. गोविन्द केसी आईसीयूमा भर्ना
जुम्ला – शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि अनसनस्थलबाट अस्पताल पुर्‍याइएका डाक्टर गोविन्द केसीले कुनै पनि स्वास्थ्य जाँच गर्न मान्नु भएकाे
विमानस्थलमा उडानको चाप बढ्दै
काठमाडौं । बन्दाबन्दीको करिब चार महिनाको अवधिमा पनि मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चार्टर्ड, कार्गो र उद्धार उडान गरी
सांसदहरुलाई का‌ंग्रेसको निर्देशन- प्रत्येक मन्त्रालयका हरेक गतिविधि निगरानी गर्नू